Man United oo barbardhac 0-0 ay gurigeeda ku gelisay Newcastle. Xawligii ay Kooxda Manchester United ku bilowday horyaalkan cusub ee Ingiriiska ayaa la hakiyey maanta kulankii ay uga hortagtay kooxda Newcastle ka dib markii ay United ku guuldaraysatay in ay guul ka hesho kulankaasi oo ay 0-0 isku mari waayeen.
Mo Farah oo ku guulaystay biladda dahabka ah ee orodka 10000m cayaaraha adduunka.
Orodyahanka caanka ah ee Maxamed Faarax una orda dalka Ingiriiska ayaa mar kale ku guulaystay biladda dahabka ah ee orodka 10000m ee cayaaraha fudud ee dunida oo maanta ka furmay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha.
Waaberi oo garaacday WArta NAbadda una soo gudubtay Semifinalka tartanka Degmooyinka.
Degmada Waaberi ayaa ka adkaatay dhigeeda warta Nabadda kulan ka tirsan wareegga sideeda tartanka degmooyinka goboka Banaadir oo galabta ka dhacay garoonka Banaadir.
Muridi Abanuur oo ugu hambalyeeyey macalimiinta K Kolayga xilalka loo magacaabay. Xiidigii hore ee xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo naadigii Madbacadda Qaranka Muriidi Abanuur Abati (Midig-dhaw sawirka bidix) ayaa macalimiinta xulalka kubadda Kolayga Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey xilalka loo magacaabay. Read More...
Dekadda oo ku durdurisay Horseed tartanka horyaalka kubadda Gacanta. Kooxda Dekedda oo kulankii koowad ee horyaalka guuldaro la soo kulantay ayaa ciyaartan garoonka ku soo gashay in ay gaarto guushii uGu horeysay iyadoo guuldaro kale oo ay la kulantaa hoos u dhigaysay rajadeeda horyaalka.
Shabakad cayaareed oo hawada soo gashay Fadlan riix sawirka sare si aad u daalacato wararka Kubadbile.com
Macalin Khaliifaani oo ka soo kabanaya dhaawaciisii dibna ugu laabtay garoomada.(Daawo)
Manchester United oo hanatay guushii ugu horeysay ee Horyaalka Ingiriiska. Kooxda Manchester United ayaa kulankii ugu horeeyey ee horyaalka cusub ee dalka Ingiriiska kana dhacay garoonka Old Traford ee magaalada Manchester 1-0 uga adkaatay kooxda reer London ee Tottenham. Read More...
Page 8 of 16First Previous 3 4 5 6 7  9 10 11 12 Next Last Search Articles...